Izindawo Zamahhala Zokusakazwa Kwezemidlalo zango-2020 - Bukela bukhoma ku-inthanethi - Ezokuzijabulisa
Izindawo ezi-8 eziphezulu zokusakaza ezemidlalo zamahhala zango-2020
Unyaka wezi-2020 ubusenze sanamathela kakhulu kwezobuchwepheshe, futhi ukuzibandakanya kwethu emisebenzini eyenziwa emnyango kwandisiwe. Ukubuka ezemidlalo online kungenye yezinto esizithandayo esizijabulelayo ngenkathi sisekhaya. Ngakho-ke, kuthiwani ngokwazi amasayithi wokusakaza ezemidlalo amahle kakhulu?
Impendulo yakho inguyebo! Njengakuzo zonke izingxenye zomhlaba, othile ungumthandi wezemidlalo okungenani owodwa. Izinkundla zenziwa umhlaba wonke ngokusakazwa bukhoma. Futhi isidingo samasayithi okusakaza ezemidlalo siyanda.
Yini engaba yizici ezenza indawo yokusakaza ibe ngcono kunezinye? Yebo, kwezemidlalo, kungahle kube ukungabizi. Kukhona ezinye izici futhi ngaphandle kwezindleko ezibandakanyekile ekwenzeni ababukeli baneliseke ngokubuka noma iyiphi imidlalo bukhoma, njengoba ukubuka umdlalo kugcwele ubumnandi nokuzwa.
Abathandi bezemidlalo emhlabeni jikelele badinga ukwazi izingosi zokusakaza ezimahhala futhi banikeze iwashi lekhwalithi ngekhwalithi ebonakalayo ebonakalayo nokusakazwa okungapheli ngaphandle kwamaphutha.
Lo mbhalo uhlose ukukusiza ekukhetheni amasayithi amahle kakhulu kuwe!
Izindawo Zamahhala Zokusakazwa Kwezemidlalo 2020- Uhlu lwe-Top 8
Siyethemba ukuthi isingeniso sikusizile kancane ukwazisa ingqondo yakho ngokuthi kungani kufanele wazi lolu hlu olulandelayo lwezingosi ezisakazwa bukhoma zezemidlalo.
Ake sehle nayo ..
Izinsizakalo ezi-10 + ezihamba phambili zokusakazwa kwe-TV
Bukela i-TV Shows Online (2020)
1. Isiza sokusakaza se-ESPN
I-ESPN ingelinye lamasayithi wokusakaza athandwa kakhulu emhlabeni wezemidlalo yekhebula. Inikeza abathandi bezemidlalo ukubuka izinhlobo eziningi zezemidlalo mahhala.Imidlalo ekhululekile ukuyibuka kuleli sayithi iHockey, ibhola, igalofu, ithenisi, ezemidlalo yasekolishi nezinye izigaba eziningi zemidlalo. Kepha ayikusekeli ukunakekelwa kwamahhala kuyo yonke imidlalo.Ngakho-ke, kufanele uthenge okubhaliselwe kwe-premium ukuze uwabuke. Inesicelo futhi esingalandwa kuma-Smartphones akho.
I-ESPN iyisayithi lezemidlalo lokusakazwa kwamahhala ukukusiza ukuthi ubuke imidlalo eminingi edumile mahhala. Ukusetshenziswa kwayo kwenza kube lula ukufinyelela ngokusebenzisa ama-smartphone akho.Inikeza imidlalo ebalulekile ongayibuka mahhala, futhi yonke le yimidlalo ethandwa kakhulu futhi efuna kakhulu emhlabeni wonke.
Inikeza nokusakazwa kwamahhala kwamavidiyo futhi.
Inikeza ezemidlalo ezithandwayo mahhala.
Ayinikezi yonke imidlalo mahhala.
Uhlelo lokusebenza ludinga ukubhalisa.
Ukubhalisa kwenza ukufinyelela kube nzima kakhulu.
2. Isayithi lokusakaza le-Facebook
I-Facebook Watch kungenye yokusakazwa kwezemidlalo kwamahhala enenani elilinganiselwe lezemidlalo lababukeli emhlabeni wonke abazokubuka ngokubukwa okuhle kwekhwalithi futhi ngaphandle kwamaphutha.I-Facebook iyinkundla yezokuxhumana enkulu kunazo zonke, futhi ingxenye enkulu yabantu emhlabeni iyilungu le-Facebook. Ungabuka ifayili le-MLB imidlalo ngokusebenzisa i-akhawunti yakho ye-Facebook.Imidlalo ongayibuka ngokusakazwa kokubuka kwe-Facebook ifaka i-basketball yabesifazane, ukuntweza olwandle neminye imidlalo ebonakalayo.
Ukubukwa kwe-Facebook kungenye indawo yokusakaza yamahhala engakusiza ukuthi ubuke imidlalo ebonakalayo kalula kusuka kuma-Smartphones, ama-laptops noma amakhompyutha akho.Ungabuka inani elilinganiselwe lezemidlalo ngalokhu kusakaza, kepha ikhwalithi ekuhlinzekayo igqamile. Kukusiza ukuthi ubuke ngaphandle kwamaphutha angakwenza ukhungatheke.
Ngakho-ke, sincoma ukuthi uzozama le sayithi kulo nyaka.
Inikeza ukufinyelela okulula kubasebenzisi be-Facebook.
Inikeza ukubukwa okuhle kwekhwalithi.
Kungenzeka kudukise ngenkathi kuseshwa ezemidlalo ezithile.
Inenombolo encane yemidlalo yokusakazwa.
3. Isayithi lokusakaza bukhoma le-Soccer Soccer
Ingesinye sezindawo zokusakaza ezithandwa kakhulu futhi eziphawulekayo zemidlalo.Inikeza abasebenzisi bayo izinombolo eziningana zemidlalo ebukhoma ukuze basakaze ngokukhululekile. Ukubonakala kwayo nekhwalithi yezithombe kuhle kakhulu futhi kukwenza uthokozele ezemidlalo ngempumelelo.Inesicelo seselula sabo bonke abasebenzisi be-Android ne-IOS, ngakho-ke kunzima ukufinyelela.
Elinye iphuzu elihle ngaleli sayithi ukuthi likunikeza ukuthi ubuke ukusakazwa bukhoma ngaphandle kokubhalisa.Ukubhalisa kuyisinyathelo esibalulekile kwamanye amasayithi amaningi. Lokhu kwenza ukuthi ikleliswe ohlwini kumasayithi aphezulu ezemidlalo.
Inikeza ukusakazwa kwamahhala.
Ukufinyelela kwayo kukhawulelwe ngokwendawo.
4. Isiza Sokusakaza Kwezemidlalo seLaola-1
ILaola-1 ingenye yokusakaza okuhle kakhulu. Isekelwe e-Austria, kepha inikeza ezemidlalo zomhlaba wonke kunguqulo yesiNgisi.Kunezinhlobo eziningi zemidlalo ongazithola mahhala kuleli sayithi. Kuyasiza abathandi bezemidlalo embulungeni yonke ukubuka imidlalo yamazwe omhlaba yebhola, i-volleyball, ama-motorsports, ithenisi neminye imidlalo eminingi evelele nefuna ngenkani emhlabeni jikelele.
Isiza sokusakaza seLaola-1 kungaba inketho engcono kakhulu kuwe yokubuka imidlalo oyithandayo emhlabeni jikelele. Ikunikeza ukuthi ubuke ezemidlalo zomhlaba wonke ezibandakanya ezemidlalo ezinkulu nezithandwayo emhlabeni.Le sayithi ingakusiza kakhulu uma ungumthandi wezemidlalo njengoba igcwele imidlalo ehlukahlukene ongayisakaza mahhala.
Inikeza ukubuka imidlalo yomhlaba.
Ihambisa imidlalo mahhala.
Kuthatha isikhathi ukulayisha.
Uhlobo lwayo lwesiNgisi lwenza kube nzima uma ungasiqondi isiNgisi.
5. Indawo yokusakaza ye-Stream2watch
I-Stream2watch ingesinye sezindawo zokusakazwa ezikhangayo kubathandi bezemidlalo emhlabeni jikelele. Inikeza ngezemidlalo ehlukahlukene ethandwa ukusakazwa mahhala.Inezixhumanisi zangaphandle zamanye amasayithi ngakho-ke ingakusiza ngeminye imithombo yokubuka amavidiyo nezemidlalo. Ibuye ivumele abasebenzisi ukuthi badlale imidlalo ehlukile.
Ungasesha noma yimuphi umdlalo ngenkathi usebenzisa leli sayithi.Imidlalo enikela ukuyibukela mahhala ngumbhoxo, i-baseball, ibhola kanye neminye imidlalo eminingi evelele nefuna ngenkani emhlabeni wonke.I-Stream2watch ingelinye lamasayithi amahle kakhulu kumasayithi ezemidlalo. Kukusiza ukufinyelela kweminye imithombo futhi.
Kuyakusiza ngemidlalo oyikhonzile ongayidlala uma uyifuna.Ngakho-ke, sincoma ukuthi uzame ku- stream2watch ngamaphakeji we-jumbo ekunikeza wona.
Ihlinzeka ngemidlalo efunwa kakhulu.
Kuyasiza ngamamaki angeziwe.
Thuthukisa isayithi lokusakaza
6. Thuthukisa Abalingisi
I-Boost cast elinye igama elibalulekile neliphezulu emhlabeni wamawebhusayithi wezemidlalo ahamba phambili. Kukusiza ngokusakazwa bukhoma kwezemidlalo ehlukahlukene mahhala.Inezixhumanisi zeminye imithombo yokubonisa ukusakazwa bukhoma kwezemidlalo ehlukile. Inenethiwekhi etholakala kuyo engakusiza ekutholeni ukusakazwa kwakho kwezemidlalo okufisayo.
Inikeza abasebenzisi ukubuka imidlalo emikhulu efana nebhola, i-volleyball, i-basketball nabanye abaningi.I-Boost cast yenziwa ukusiza abathandi bezemidlalo abathanda imidlalo ebukhoma mahhala. Kukusiza ngezemidlalo ehlukahlukene, futhi ungayibuka yonke mahhala.
Ibuye inezixhumanisi zemithombo yangaphandle ngaphandle kwaleli sayithi ukukusiza ukuthi ubuke imidlalo ehlukahlukene efuna kakhulu.
Kudinga uhlelo lwe-flash ukubuka noma yini lapha.
7. IHotstar Sports Streaming Site
IHotstar ingelinye lamasayithi wokusakaza ezemidlalo ahamba phambili ka-2021 ngenxa yezinhlobonhlobo zemidlalo nekhwalithi yokubuka. Ngenye inethiwekhi yezemidlalo yamanethiwekhi ezinkanyezi aziwa kakhulu kubathandi bezemidlalo, ikakhulukazi e-Asia.Yonke imidlalo enikezwa yiHotstar ingabukwa ngekhwalithi ye-Hd. Kukusiza ukuthi ubuke ikhilikithi, ukubhukuda, ithenisi neminye imidlalo evelele nejabulisayo.
Uma ungumthandi wase-Asia nomthandi wezemidlalo, khona-ke inkanyezi eshisayo iyindlela engcono kakhulu yokuba uzuze kule combo. Inikeza imidlalo evelele nefuna kakhulu njengekhilikithi nethenisi ukuyibuka mahhala.Yize isuselwe eNdiya, ngokusebenzisa i- I-VPN , ungathola ukufinyelela ekusakazweni kwayo kwamahhala ngaphandle kokuba seNdiya ngokomzimba.
8. Isayithi lokusakazwa kweCricfree
ICricfree yisiza sokugcina sokusakaza ezemidlalo samahhala ngonyaka we-2021 ohlwini. Ingenye yezindawo ezingcono kakhulu zokusakaza ikhilikithi.Yize izinikele kwikhilikithi, ikakhulukazi inokusakaza kweminye imidlalo. Inokubukwa kwekhwalithi enhle, futhi ukubuyekezwa okuningi kubikwa kukuhle.
Igama laleli sayithi uCricfree lisikisela ukuthi leli sayithi linikezelwe ngokuphelele emhlabeni wekhilikithi. Yisayithi elihle kakhulu lokusakazwa kwezemidlalo yekhilikithi yamahhala.Iphinde isekele ukusakazwa kweminye imidlalo emikhulu futhi ethandwayo nayo.
Ikhwalithi enhle yokubuka.
Izikhangiso ezihamba phambili ze-Miss.
Zonke izingosi ezibalulwe ngenhla zisemthethweni futhi ziyizingosi zokusakaza ezemidlalo zamahhala. Sizihlolile zonke ngaphambi kokukhetha amasayithi amahle kakhulu azokusiza kulo nyaka ekubukeni imidlalo oyithandayo.
Zonke izingosi zikuhlanganisela ukunikeza iphakethe lapho ungabuka khona cishe zonke izinhlobo zemidlalo. Eziyisishiyagalombili zazo zingamakwa njengezintandokazi zakho ukuze ungadingi ukushesha ukusesha ukusakazwa bukhoma nokukhululekile kwanoma yimuphi umdlalo ongahlela ukuwubuka.
Siyethemba ukuthi le ndatshana kungenzeka ikusize!
Sikufisela inhlanhla nethimba lakho olithandayo ukunqoba!
Izibhebhe ezihamba phambili zokubuka ama-movie
i-roblox yehlisela lokho
Uhlelo lokusebenza lwamahhala lwe-netflix lwe-mac
beat software yomkhiqizi mahhala
ingabe i-sling tv inesivivinyo samahhala
sakaza amavidiyo kusuka kukhompyutha uye ku-chromecast
Ukulanda kwe-movie mahhala i-movie ephelele
Ngingayibuka kanjani i-hotstar e-usa